Saffron monkfish miaraka amin'ny makamba | Bezzia
Saffron monkfish miaraka amin'ny makamba
Mamporisika anao izahay anio ao Bezzia hanomana a fomba fahandro trondro tena tsotra ary tonga lafatra amin'ny fankalazana amin'ny ho avy: Saffron monkfish miaraka amin'ny makamba. Recipe izay azonao ampiana clams na betsimitsitekiteky mba hiparitaka bebe kokoa ny casserole.
El safrona monkfish miaraka amin'ny makamba Tsy fomba tsotra fotsiny izy io, fa haingana ihany koa, tena haingana! Tsy mila mihoatra ny 20 minitra ianao hanomanana azy io, izay ahafahanao mihaino ny raharaha hafa mandritra ny maraina. Tsy manomboka tia azy ve ianao?
Azonao atao ny manamboatra ity recipe ity miaraka amin'ny monkfish fa koa amin'ny hafa trondro toy ny hake, manitsy fotsiny ny fotoana. Ao amin'ny Bezzia dia hitanay fa safidy tsara izany rehefa misy vahiny. Raha ny marina, rehefa tsapanay fa tsy maintsy maka sary izahay mba hampisehoana ny fomba fahandro, dia efa nihinana ny antsasaky ny vahiny.
20 prawns, nopotehina
divay 1/2 vera
Koferan'ny safrona vitsivitsy
2 vera ron-trondro (azonao atao miaraka amin'ny lohan'ny moka sy ny akorandriaka)
Afanaina ao anaty vilany kely ny menaka ary asio ny tongolo lay andraso kely.
Rehefa manomboka miloko, ampidiro ny lafarinina ary andrahoy mandritra ny iray minitra eo am-pifangaroana.
Avy eo, ampio ny divay fotsy ary avelao hihena mandritra ny roa minitra.
dia arotsaho ny ron-kena trondro sy safrona. Afangaro ary andrahoy mandritra ny minitra vitsivitsy.
Avy eo, ampio ny fillet monkfish efa masaka miaraka amin'ny lafiny hoditra ary mahandro mandritra ny efatra minitra, mamporisika ny casserole indraindray.
Aorian'ny efatra minitra dia avereno ny tenderloins rapa ary ampio ny makamba. Andrahoy mandritra ny 2-3 minitra fanampiny ny fitambarany, afindrao ny casserole toy ny hoe manomana cod al pil pil ianao.
Vonoy ny afo ary arosoy ny safrona miaraka amin'ny makamba mafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Pescado » Saffron monkfish miaraka amin'ny makamba
Ny fanalahidin'ny fifandraisana lalina
Podcast 4 nalaza tamin'ny 2021, fantaro izy ireo!